ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: ကြည်ဖြူခင် မင်းသမီး Kyi Phyu Khin Attress
ကြည်ဖြူခင် မင်းသမီး Kyi Phyu Khin Attress
Kyi Phyu Khin is Myanmar new face model girl. She is one of the hot and sexy Myanmar models. These photos are from Teen Magazine. She has been acting for many posters, magazine covers and some of Myanmar Music Videos.
Kyi Phyu Khin, Myanmar sexy model girl, Myanmar hot girl
Myanmar sexy model girl, Kyi Phyu Khin's hot and sexy fashion
သူကတော့ မြန်မာမော်ဒယ် အသစ်ကလေး ကြည်ဖြူခင် ပါ။ Teen မဂ္ဂဇင်းအတွက် Cover Girl အနေနဲ့ ရိုက်ပေးထားတဲ့ ပုံလေးတွေပါ။
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 4:11 AM
zin myo December 3, 2015 at 2:22 AM